Sucuudiga oo shaneemooyin laga furayo - BBC News Somali
Waa la cusbooneysiiyay 5 Abriil 2018
Dalka Sucuudiga ayaa markii ugu horraysay mudo tobanaan sano ah dalkiisa ka furaya shineemooyin, labada todobaad ee soo socda.
Arintani waxay qayb ka tahay heshiis Sucuudigu la galay AMC oo ah shirkadda ugu wayn dunida ee sinimooyada. Shirkadduna waxay bixisay ruqsadihii ugu horeeyey ee sinimooyo magaceeda ku shaqeeya lagaga furayo Sucuudiga.
Qorshuhu waxa weeyi in AMC ay shan iyo toban magaalo oo Sucuudiga ku yaal ka furto afartan sinimoo shanta sanadood ee soo socda.
Todobaataneeyadii dalka waxa ka jiray shineemooyin laakiin waxa la xidhay markii saamaynta wadaadada Muslimiinta ah ee mayalka adagi xoogaysatay.
18-ka bishan April ayaa ah muddada loo qabtay in xadhiga laga jaro furitaanka shaneemadii ugu horeeyey ee laga furo caasimada Riyad ee Sucuudiga.
Sanadkii la soo dhaafay ayaa la arkayay bilowga olole balaadhan oo lagu doonayay in lagaga dhigo Sucuudiga wadan leh xeebo loo dalxiis tago, taas oo ka mid qeybaha ugu muhiimsan ee hiigsiga 2030 ee dalkaas.
Arrintan ayaa qeyb ka ah qorshe loogu hanqal taagayo isbadelo dhanka dhaqaalaha iyo bulshadaba ah, waxaana hoggaanka u haya dhaxal sugaha Sucuudiga Maxamed Bin Salmaan, kaasi oo dhawaan u tagay Maraykanka socdaal dhaqaalaha la xidhiidha. .
Isbaddeladan ayaa waxaa loogu talogalay inay gacan ka geystaan in dhaqaalaha Sucuudiga si uu uga gudbo ku tiirsanaanta shidaalka, iyo in shaqooyin cusub loo abuuro shacabka Sucuudiga iyo waliba inay lacagahooda ku kharash gareeyaan gudaha dalka halkii ay ugu safri lahaayeen dibaddaha si ay shineemooyin u soo daawadaan kuwooda dalxiiska u baxaa.
TOOS Madaxweynaha Jubbaland oo ku baaqay in la abaal mariyo guddiyadii doorashada
Kuuriyada Waqooyi oo shaah kula dagaallameysa coronavirus
21 Maajo 2022
Maxay tahay sababta uu dhalashada Faransiiska u qaatay Boris Johnson aabbihii?
"Dadku waxay ka soo horjeesteen gabar Muslimad ah oo xiratay surwaal gaaban"
Xiisad cusub oo ka dhex bilaabatay Turkiga iyo labo waddan oo reer Yurub ah